Fomba nentim-paharazana ara-pananahana nentim-paharazana sy tsy nentim-paharazana - izay miankina amin'ny hoe ahoana no hamaritana ny faribolana Klein
Fomba fisainana ara-nofo - inona moa izany, karazany, famantarana, fomba ahoana no hamaritana azy?
Ao amin'ny tontolo maoderina, matetika dia nanjary trangan-javatra manala baraka ny fironana ara-pananahana, satria nanomboka naneho ampahibemaso ny olona fa "tsy mitovy amin'ny olon-drehetra" izy ireo. Mahaliana ny mahafantatra hoe karazam-pihetsika inona, inona no heverina ho fitsipika, ary inona ny fihoaram-pefy, ary ny fomba fiasan'ny fiorenany.
Ny firaisana ara-nofo dia ahitana singa efatra lehibe: ny lahy sy ny vavy, ny maha-lahy sy maha-vavy, ny andraikitry ny lahy sy vavy eo amin'ny lahy sy vavy ary ny fironana ara-pananahana Ao anatin'ilay singa farany dia takatra bebe kokoa ny fahatsapana ara-pihetseham-po, ara-pihetseham-po ary ara-pihetseham-po ataon'ny olona iray amin'ny olon-kafa amin'ny sehatra manokana. Mety misy fiovana ara-nofo amin'ny heterere, homo-, bi-ary karazana hafa. Tsy misy amin'izy ireo no heverina ho aretina na aretina ara-tsaina. Ny olona dia afaka mamantatra na mandà ny fizotry ny iray.
Karazana fandehanana ara-pananahana
Maro no mihevitra fa telo ihany no karazana hoso-kevitra, saingy tsy izany ary betsaka ihany koa. Ny lisitr'ireo fisainana ara-pananahana dia miverimberina foana ary amin'ny ohatra ohatra dia azo atao ny miteraka karazana toy izao:
Asexuals . Ireo olona tsy mahatsapa faniriana hanao firaisana ara-nofo, na dia afaka mankasitraka ny fahatsaram-pon'ny hafa aza izy ireo.
Sapioexuals . Iray amin'ireo karazana fomba fijery mahavariana indrindra, satria mahatsapa ny hafalian'ireo fahaiza-manaon'ilay mpiara-miasa ny olona. Etsy an-danin'izany, betsaka kokoa ny vehivavy eo amin'ny sapiosexuals noho ny lehilahy.
Panseksualy . Famantarana ny fironana ara-pananahana eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy - ny fanintelon'ireo olona avy amin'ny lahy sy vavy ary na dia ny mpandika lalàna aza. Panseksualov no liana kokoa amin'ny toetra maha-izy azy sy ny fihetseham-po tsapany rehefa mifampiresaka. Ho azy ireo, ny akaiky indrindra ara-panahy dia manan-danja kokoa noho ny maha-lahy sy maha-vavy.
Aromantika . Ny olona manana firaisana ara-nofo dia liana amin'ny firaisana, fa ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po ho azy ireo dia tsy manan-danja. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, izy ireo dia mamaritra fotsiny ireo namana mpifanaraka aminy, satria tsy mifandray amin'ny fitaovana.
Toetra ara-pananahana mahazatra
Raha mahatsapa ny faniriana hanao firaisana ara-nofo ho an'ny mpikambana ao amin'ny andaniny firaisana ara-nofo ny olona iray, dia heverina fa manana tanjona amin'ny heterosexual. Io karazany io dia manan-danja. Fihetseham-po ara-nofo ara-nofo, izay heverina ho marina. Izany dia nohazavaina amin'ny hoe eo amin'ny tontolon'ny biby ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy no hita amin'ny endriny madio, ary ao anatin'izy ireo dia tsy mahatsapa fifampikasokasoka ny tsirairay amin'ny firaisana ara-nofo iray fa matetika izy ireo dia maneho herisetra amin'ny tolona ho an'ny namana tsara kokoa.
Firaisana ara-nofo tsy ara-piraisana
Ity karazana hetsika ity dia ahitana ny homo- sy bisexuality . Amin'ny tranga voalohany, ny olona dia voasariky ny olona eo amin'ny lahy sy ny vavy, ary amin'ny faharoa - ho an'ireo solontenan'ny lahy sy vavy. Teo am-piandohana dia noheverina fa misy fiovana ara-psikolojika ny olona manana fijery ara-pananahana tsy ara-dalàna. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20 dia nanaporofo ny fisian'ny psikology Havelock Ellis fa voajanahary ny homosexualité, noho izany dia anisan'ireo safidy natokana izany.
Famolavolana ny fironana ara-pananahana
Misy dikan-teny samihafa mikasika ny fomba fiasa miforona, ary maro amin'izy ireo no diso. Ny mpahay siansa dia nanaporofo fa tsy afaka miova ny fironana ara-pananahana noho ny fihetsika diso nataon'ny ray aman-dreny, ny herisetra ara-pihetseham-po ary ny toy izany. Mba hahatakarana hoe inona no mamaritra ny fironana ara-pananahana, dia natao ny fanadihadiana mikasika ny fanabeazana ny foetus ao an-kibo.
Mino ny mpahay siansa fa 6-8 herinandro aorian'ny fiterahana, hormones maro no miditra ao amin'ny embryon, izay manan-danja amin'ny fananganana ny firaisana ara-nofo sy ny rafitry ny atidoha. Ny ampahany voalohany amin'izy ireo dia mandeha amin'ny fampivelarana ny toetra maha-lahy sy vavy, ary ny zavatra rehetra mitoetra - amin'ny famolavolana ny atidoha. Raha tsy ampy ny habetsahan'ny hormones, dia misy fiovana eo amin'ny fironana ara-pananahana. Ny antony voalohany amin'ny tsy fahombiazan'ny hormona: ny adin-tsaina , ny aretina ary ny fanafody sasany mandritra ny 2 volana voalohany. bevohoka.
Ahoana no hamaritra ny fironana ara-pananahana?
Ireo mpahay siansa sy psikology any Amerika dia nitarika fikarohana izay nanome valiny mahatalanjona. Ny famaritana ny fironana ara-pananahana dia azo atao eo amin'ny halavan'ny rantsantanana eo amin'ny sandry. Vokatr'izany dia voatsindrona ireto fanatso manaraka ireto:
Lesbiana - ny lanjan'ny peratra dia lava kokoa noho ny fanondro ny fanondro.
Ireo ankizivavy manana tanjona amin'ny heterosexuality - ny rantsan-tànana tsy misy anarana sy ny fisehoana dia manana halava mitovy.
Ny gay - ny fanondro ny fanondro dia lava kokoa noho ilay rantsana tsy fantatra anarana.
Lehilahy miaraka amin'ny fomba fijery manjavozavo - ny halavan'ny rantsan-tanana dia lava kokoa noho ny fanondro ny fanondro.
Raki-bolana momba ny firaisana ara-nofo
Tamin'ny taona 1985, Fritz Klein, mba hahafantarana tsara kokoa sy handrefesana ny tanjon'ny olona, ​​dia nanolotra lozam-pifaneraseran'entana telo izay mampiavaka ny traikefa ara-nofo sy ny fantasy ao anatin'ny telo fotoana: ny ankehitriny, ny ho avy sy ny lasa. Ny tranonkala sex orientation kely dia manampy amin'ny fijerena ny fihanaky ny firaisana mandritra ny fiainana. Ny andalana telo dia tsy maintsy fenoina sanda 1 ka hatramin'ny 7 ho an'ny parameter tsirairay. Amin'ny famenoana izany dia ilaina ny mandinika fa, satria tsy mamaritra ny fialan-tsiny ny fandraketan-tsakafo, dia mety ho foana ny grafika mifanaraka amin'izany.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia naseho tamin'ny mizana samihafa izy ireo, nahazoana alalana. Azo apetraka amin'ny seza telo izy ireo (taloha, ankehitriny ary taloha), ary ny vola natokana isaky ny telo. Mba hahafantarana ny isa hetero / homosexualité dia ahitanao ny habetsahan'ny endriky ny endriky ny sehatra rehetra ary mizara azy amin'ny isa feno ny sela feno, izay mety ho 21 na latsaka. Ny fiheverana ara-piraisana ara-nofo no ahitana ireo toetra ireo:
Fihetseham- pon'ny olona - olona, ​​inona no mahatonga ny fientanam-pihetseham-po hampiakatra ny vatany?
Ny fitondran-tena dia ny firaisana ara-nofo tena mpivady ara-piraisana, izany hoe, miaraka aminy no mifandray amin'ny fikarakarana ara-batana: kisses, mifamihina ary mifankatia.
Fihetseham- pon'ny vehivavy - manao ahoana ny firaisana tsikombakomba ataon'ny olona amin'ny eritreritrareo?
Ny fiheverana ara-pihetseham-po - inona ny lahy sy ny vavy no namanao nifampiresaka taminao?
Ny safidy ara-tsosialy - izay tian'ny olona tianao hifandraisana, miasa ary mandany fotoana malalaka?
Fiainana - Manokana fotoana be indrindra amin'ny olona izay manana firaisana ara-nofo samihafa.
Famantarana ny tenanao - Ahoana no hamaritanao ny orientanao?
Amin'ity fe-potoana ity dia midika fa aretina ara-tsaina iray izay ahafahan'ny olona iray miresaka momba ny faniriany maharitra hanova ny fironany ara-pananahana. Ny tsy fahombiazany dia tsy mahakasika ny orinasa, fa ny fiovana amin'ny fisainana, ny traikefa ary ny fahakiviana. Ny antontan'isa dia maneho fa ny aretina toy izany mifandraika amin'ny fironana ara-pananahana dia matetika hita ao amin'ny homosexuals izay tsy manaiky ny fisintonany noho ny firongatry ny vahoaka.
Ho fanatanterahana io aretina io, ny fikarohana dia natao amin'ny famantarana momba ny firaisana ara-nofo, ny fihetseham-po ara-pihetseham-po sy ny fifandraisana eo amin'ny samy lahy na samy vavy, ary ny fianarana klinika sy psikopatolojika mba hisintonana olana goavana amin'ny saina. Ho fanekena ny fananahana ara-pananahana, ny fitsaboana dia natao hanatsarana ny fampifanarahana ara-tsosialy sy ara-pananahana. Karazana fitsaboana samihafa no ampiasaina.
Ireo olo-malaza miaraka amin'ny fironana ara-pananahana
Satria ny fiarahamonina isan-taona dia mendri-piderana kokoa amin'ireo solontenan'ireo vitsy an'isa ara-pananahana, ny mpihira, ny mpanakanto, mpilalao horonantsarimihetsika Hollywood miaraka amin'ny fironana ara-pananahana tsy ara-pananahana dia mihamafy hatrany izany. Andeha isika handinika tsara ireo fikomiana izay niteraka resabe tamin'ny vahoaka:
Elton John - dia niresaka momba ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana tamin'ny 1976.
Ellen Degeneres - tamin'ny 1997 dia nisy ny gazetiboky iray, teo amin'ny saron'ilay izy no fototry ny fitokonana.
Tom Ford , nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny gazetiboky malaza, dia niresaka momba ny fifandraisany lava amin'ny loham-baovao amin'ny gazetiboky Women's Wear Daily.
Stefano Gabbano sy Domenico Dolce dia mpanamboatra malaza, nifaneraserany nandritra ny 15 taona mahery izy ireo, saingy manana namana hafa izy ireo izao.
Adam Lambert - tsy nanafina ny fironany ara-pananahana.
Nahoana ianao no te hanao firaisana mandritra ny vanim-potoanao?
Ahoana ny fisafidianana ny kapaoty?
Asio "vehivavy ambony"
Andro mampidi-doza ho an'ny bevohoka
Ny plastika Evra
Ahoana ny fomba hanaovana ravina amin'ny voninkazo?
John Legend sy Chrissie Tayen dia nitondra ny zanany vavy tamin'ny dia lavitra
Ny fitsaboana ny gripan-kisoa amin'ny zaza
Hambokely ho an'ny fonenan'ny fahavaratra
Esoterika sy fahaiza-miaina
Bilaogera tsy mahazatra
Hair tailor Tail
Sakafo mofomamy miaraka amin'ny rano mangatsiaka
Fitiavana na fitiavana?
Verapamil amin'ny fitondrana vohoka
Misotro avy amin'ny crusts mandarinina
Fanampiana psychika amin'ny toe-javatra mitranga